【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】တုပျကှေး ကာကှယျဆေး (Flu Vaccine) အကွောငျးတစေ့ တစောငျး | Opinion Leaders
မိုးဦးကာလရောကျလာတော့မှာမို့ မကွာခငျ တုပျကှေးရာသီ ရောကျလာတော့မှာပါ။ ဒီရာသီမှာ တုပျကှေးမဖွဈဖူးတဲ့သူ ရယျလို့ ရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဖွဈတာမို့ နှာစေး ခြောငျးဆိုး ဖြားနာ တပတျလောကျနရေငျ ကောငျးသှားတတျပမေယျ့ ကိုယျခံအားနညျး နခွေငျးကွောငျ့ ဖွဈစေ ပွောငျးလဲလာတဲ့ ဗိုငျးရပျဈ strain ပွငျးထနျလို့ဖွဈစေ တခြို့သူတှမှော နမိုးနီးယား အဆုတျရောငျခွငျး၊ ဦးနှောကျရောငျခွငျး ဒီလို ပွငျးထနျတဲ့ နောကျဆကျတှဲ လက်ခဏာ တှရှေိနိုငျတာမို့ ကွိုတငျကာကှယျခွငျးဟာ အကောငျးဆုံးပါ။ ယခုအခြိနျသညျ COVID 19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ဖွဈပှားနခြေိနျလညျး ဖွဈသောကွောငျ့ ထိုရောဂါ လက်ခဏာမြားမှာလညျး ရာသီတုပျကှေး လက်ခဏာမြားနှငျ့ ခပျဆငျဆငျဖွဈနသေညျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနှဈဟာ တုပျကှေး ကာကှယျဆေးထိုးထားသငျ့တဲ့နှဈလို့တောငျ ပွောရမလိုပါပဲ။
တုပျကှေးကာကှယျဆေး flu vaccine ဆိုတာ ဘာလဲ?
Influenza virus ကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ရာသီတုပျကှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှနေဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှကေို ကာကှယျဖို့ ထိုးရတဲ့ဆေးပါ။ ဗိုငျးရပျဈက တနှဈ နဲ့ တနှဈ ဖွဈနိုငျတဲ့ strain မတူတာကွောငျ့ ကာကှယျဆေးကလညျး နှဈစဉျ အသဈထှကျနရေတာပါ။ ဥပမာ - ယခုနှဈအတှကျဆို ၂၀၁၉ ကထှကျထားတဲ့ ကာကှယျဆေး ထိုးလို့မရပါဘူး။ ကာကှယျ ဆေးမှာ ကမ်ဘာ့တောငျခွမျး (Southern hemisphere) အတှကျ ကာကှယျဆေးနှငျ့ ကမ်ဘာ့မွောကျ ခွမျး (Northern hemisphere) အတှကျ ထုတျတဲ့ ကာကှယျဆေး ဆို ရှိတဲ့အနကျ မွနျမာနိုငျငံ ကတော့ မလေ ကနေ အောကျတိုဘာလအတှငျး တုပျကှေးအဖွဈမြားတာမို့ Southern hemisphere တောငျခွမျးအတှကျ ထုတျတဲ့ ကာကှယျဆေးကိုသာ ထိုးသငျ့တာပါ။
တုပျကှေးကာကှယျဆေးက virus အရှငျက ထုတျထားတဲ့ live vaccine မဟုတျဘဲ virus ရဲ့ အစိတျအပိုငျးတခြို့ကနထေုတျထားတဲ့ inactivated attenuated vaccine အမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။ ဗိုငျးရပျဈ strain သုံးမြိုးကို ကာကှယျနိုငျတဲ့ trivalent vaccine နဲ့ လေးမြိုးကို ကာကှယျနိုငျတဲ့ tetravalent vaccine ဆိုပီး နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ ယခုနှဈ ၂၀၂၀ အတှကျ ဆေးကတော့ Influenza type A( H1N1, H3N2) နဲ့ type B ထဲက strain နှဈမြိုး စုစုပေါငျး လေးမြိုးကို ကာကှယျနိုငျတဲ့ tetra or quadrivalent အမြိုးအစားပါ။
ဘယျလိုလူတှမှော တုပျကှေးကာကှယျဆေး ထိုးသငျ့လဲ?
ဖွဈနိုငျရငျ အသကျ ၆လမှ စလို့ လူတိုငျး ထိုးရငျကောငျးပမေယျ့ ခုအောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ သူတှေ ကတော့ high risk persons တှဖွေဈလို့ ကာကှယျဆေးထိုးသငျ့ပါတယျ။
-အသကျ ၆၅ နှဈနှငျ့အထကျ လူကွီးမြား
-အသကျ ၅ နှဈအောကျကလေးမြား
-ပနျးနာရငျကွပျ၊ ဆီးခြို နှငျ့ နာတာရှညျ ခုခံမှု အားနညျးသော ရောဂါသညျမြား
တုပျကှေးကာကှယျဆေး အာနိသငျ ပွဖို့ ၂ပတျခနျ့ကွာနိုငျတာကွောငျ့ တုပျကှေးရာသီမတိုငျခငျ အနညျးဆုံး နှဈပတျအလို ကွိုထိုးထားသငျ့ပါတယျ။
-ကာကှယျဆေးက လကျမောငျး သို့မဟုတျ ပေါငျမှ ကွှကျသားထဲ ထိုးရသညျ
-မထိုးခငျ သိမျးဆညျးထားသော ရခေဲပုံး သို့ ရခေဲသတ်ေတာမှ ထုတျယူပွီး ခဏအကွာမှ ထိုးသငျ့သညျ
-Syringe တဈခုစီတှငျ ကာကှယျဆေး 0.5ml ပါဝငျတာဖွဈပွီး မထိုးခငျ ဆေး syringe ကို လှုပျခါပေးပါ
-ကာကှယျဆေးမထိုးခငျ ဆေးရညျ ကွညျသလား စဈဆေးသငျ့ပါသညျ၊ အမှုနျအမှားပါနရေငျ ဆေးရညျ နောကျကြိနရေငျ အာနိသငျ ပကျြပွယျနနေိုငျသညျ
ထိုးသညျ့ နရောတှငျ နာခွငျး၊ အဖြားငှငှေ့ရှေိ့ခွငျး၊ ကိုယျလကျကိုကျခဲခွငျး စတဲ့ မပွငျးထနျတဲ့ လက်ခဏာလေးတှတေော့ အခြို့သူတှမှော ဖွဈတတျပါတယျ။
(၁ )ဒီနှဈအတှကျ ထုတျထားတဲ့ ဆေးဖွဈဖို့ လိုပါတယျ
(၂)ကာကှယျဆေးကို သိမျးဆညျးရာမှာလညျး cold chain system လို့ချေါတဲ့ သငျ့တျောတဲ့ အအေးဓါတျ ၂ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျ မှ ၈ ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျ အတှငျး သိမျးဆညျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နားလညျ တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျ သို့မဟုတျ ကနျြးမာရေး ဌာနမှာပဲ ထိုးသငျ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကာကှယျဆေးမှာ ကွကျဥပရိုတိနျးဓါတျပါဝငျတာကွောငျ့ အခြို့သော ကွကျဥနဲ့ ဓါတျမတညျ့တဲ့သူတှမှော သတိထားသငျ့ပါတယျ။ သို့သျော ဓါတျမတညျ့မှုမှာ အလှနျရှားပါတယျ။
(ကငျဆာ ရောဂါရှိသူမြားမှာလညျး ကိုယျခံအားနညျးနနေိုငျတာကွောငျ့ ထိုးသငျ့ပါတယျ။ သို့သျော ကငျဆာဆေး သှငျးခွငျးနှငျ့ ဓါတျရောငျခွညျ ကုသမှု ပွီးမှသာ ထိုးသငျ့ပါတယျ)
မိုးဦးကာလရောက်လာတော့မှာမို့ မကြာခင် တုပ်ကွေးရာသီ ရောက်လာတော့မှာပါ။ ဒီရာသီမှာ တုပ်ကွေးမဖြစ်ဖူးတဲ့သူ ရယ်လို့ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တာမို့ နှာစေး ချောင်းဆိုး ဖျားနာ တပတ်လောက်နေရင် ကောင်းသွားတတ်ပေမယ့် ကိုယ်ခံအားနည်း နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် strain ပြင်းထန်လို့ဖြစ်စေ တချို့သူတွေမှာ နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ရောင်ခြင်း ဒီလို ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာ တွေရှိနိုင်တာမို့ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ ယခုအချိန်သည် COVID 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေချိန်လည်း ဖြစ်သောကြောင့် ထိုရောဂါ လက္ခဏာများမှာလည်း ရာသီတုပ်ကွေး လက္ခဏာများနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေသည်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ဟာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသင့်တဲ့နှစ်လို့တောင် ပြောရမလိုပါပဲ။
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး flu vaccine ဆိုတာ ဘာလဲ?
Influenza virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ထိုးရတဲ့ဆေးပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်က တနှစ် နဲ့ တနှစ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ strain မတူတာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးကလည်း နှစ်စဉ် အသစ်ထွက်နေရတာပါ။ ဥပမာ - ယခုနှစ်အတွက်ဆို ၂၀၁၉ ကထွက်ထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့မရပါဘူး။ ကာကွယ် ဆေးမှာ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်း (Southern hemisphere) အတွက် ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကမ္ဘာ့မြောက် ခြမ်း (Northern hemisphere) အတွက် ထုတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေး ဆို ရှိတဲ့အနက် မြန်မာနိုင်ငံ ကတော့ မေလ ကနေ အောက်တိုဘာလအတွင်း တုပ်ကွေးအဖြစ်များတာမို့ Southern hemisphere တောင်ခြမ်းအတွက် ထုတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးကိုသာ ထိုးသင့်တာပါ။
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးက virus အရှင်က ထုတ်ထားတဲ့ live vaccine မဟုတ်ဘဲ virus ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ကနေထုတ်ထားတဲ့ inactivated attenuated vaccine အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် strain သုံးမျိုးကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ trivalent vaccine နဲ့ လေးမျိုးကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ tetravalent vaccine ဆိုပီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ယခုနှစ် ၂၀၂၀ အတွက် ဆေးကတော့ Influenza type A( H1N1, H3N2) နဲ့ type B ထဲက strain နှစ်မျိုး စုစုပေါင်း လေးမျိုးကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ tetra or quadrivalent အမျိုးအစားပါ။
ဘယ်လိုလူတွေမှာ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်လဲ?
ဖြစ်နိုင်ရင် အသက် ၆လမှ စလို့ လူတိုင်း ထိုးရင်ကောင်းပေမယ့် ခုအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သူတွေ ကတော့ high risk persons တွေဖြစ်လို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ပါတယ်။
-အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် လူကြီးများ
-အသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေးများ
-ပန်းနာရင်ကြပ်၊ ဆီးချို နှင့် နာတာရှည် ခုခံမှု အားနည်းသော ရောဂါသည်များ
တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး အာနိသင် ပြဖို့ ၂ပတ်ခန့်ကြာနိုင်တာကြောင့် တုပ်ကွေးရာသီမတိုင်ခင် အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်အလို ကြိုထိုးထားသင့်ပါတယ်။
-ကာကွယ်ဆေးက လက်မောင်း သို့မဟုတ် ပေါင်မှ ကြွက်သားထဲ ထိုးရသည်
-မထိုးခင် သိမ်းဆည်းထားသော ရေခဲပုံး သို့ ရေခဲသေတ္တာမှ ထုတ်ယူပြီး ခဏအကြာမှ ထိုးသင့်သည်
-Syringe တစ်ခုစီတွင် ကာကွယ်ဆေး 0.5ml ပါဝင်တာဖြစ်ပြီး မထိုးခင် ဆေး syringe ကို လှုပ်ခါပေးပါ
-ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင် ဆေးရည် ကြည်သလား စစ်ဆေးသင့်ပါသည်၊ အမှုန်အမွှားပါနေရင် ဆေးရည် နောက်ကျိနေရင် အာနိသင် ပျက်ပြယ်နေနိုင်သည်
ထိုးသည့် နေရာတွင် နာခြင်း၊ အဖျားငွေ့ငွေ့ရှိခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း စတဲ့ မပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာလေးတွေတော့ အချို့သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၁ )ဒီနှစ်အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ ဆေးဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်
(၂)ကာကွယ်ဆေးကို သိမ်းဆည်းရာမှာလည်း cold chain system လို့ခေါ်တဲ့ သင့်တော်တဲ့ အအေးဓါတ် ၂ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် မှ ၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အတွင်း သိမ်းဆည်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး ဌာနမှာပဲ ထိုးသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကာကွယ်ဆေးမှာ ကြက်ဥပရိုတိန်းဓါတ်ပါဝင်တာကြောင့် အချို့သော ကြက်ဥနဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့သူတွေမှာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ သို့သော် ဓါတ်မတည့်မှုမှာ အလွန်ရှားပါတယ်။
(ကင်ဆာ ရောဂါရှိသူများမှာလည်း ကိုယ်ခံအားနည်းနေနိုင်တာကြောင့် ထိုးသင့်ပါတယ်။ သို့သော် ကင်ဆာဆေး သွင်းခြင်းနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုသမှု ပြီးမှသာ ထိုးသင့်ပါတယ်)